Sida loo soo dhoofsadaan PPT ama taabanaysa isu-diridda si aad iPad (Mountain Libaaxa ka mid ah)
> Resource > iPad > Sida loo soo dejinta PPT ama taabanaysa isu-diridda Faylal ay si aad iPad (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Sida loo soo dejinta PPT ama taabanaysa isu-diridda Faylal ay si aad iPad (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Lahaanshaha PowerPoint bandhigid ama taabanaysa isu-diridda ee aad PC ama Mac, aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay ku kaydi iPad ee fantastik ah soo bandhigidda ah. Waxaad ma jiidi karo PPT si ay iPad sida ay u disk adag, in kastoo.
Halkan waxaan ku talinaynaa laba siyaabood oo loo soo dhoofsadaan bandhigay PowerPoint ama taabanaysa isu-diridda u iPad. Mid ka mid ah waa in ay isticmaalaan Lugood oo kale waa in la isticmaalo Email.
1. isticmaalka Lugood in lagu daro taabanaysa isu-diridda si iPad
Marka hore, habka ugu fudud yahay inay isticmaalaan Lugood u dhigay taabanaysa isu-diridda si iPad. Codsiga Open Lugood iyo fur ee iPad. In Lugood ee aad PC ama Mac, dooro iPad iyo guji tab App ah. Markaasuu ku qaybsiga qaybta faylka, dooro taabanaysa isu-diridda iyo guji badhanka dar. Ugu dambeyntii, ka heli guji Add in aad ku darto files bandhig aad rabto in aad ku riday gal iPad ah.
2. Email-diridda ama PowerPoint bandhigid.
Email PPT ama taabanaysa isu-diridda naftaada si. Fur aad iPad iyo maamusho iPad ee Mail app. Waxaad file ka content fariin aad kala soo bixi kartaa.
Marka dajinta la dhammeeyo, guji si aad u furi. By default, waa in la furi doono in hab Kulanka Xiisaha Leh. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay taabanaysa isu-diridda u iPad lagu rakibay, waxay ku siin doontaa fursad u furi in taabanaysa isu-diridda. Riix Open ee button-diridda iyo iPad ah u dajiyaan doonaa taabanaysa isu-diridda. Si looga fogaado jira 2 files taabanaysa isu-diridda ee iPad, dib u tag email iyo tirtirto mail ah.
Fiiro -diridda in iPad ma taageeri wax kasta Mac taageero. Dareen sahal marka ka dhacay si ay u arkaan fariin digniin ah. Tusaale ahaan, waxaad ma dajiyaan kartaa xusuusqor idaaciga. Haddii aad isku daydo in ay soo dhoofsadaan bandhig qoraallada, waxaad heli doontaa fariin digniin ah.
Sidee u daawan karaa Movies On iPad
Sida loo Delete nuqul Songs on iPad
Sida loo abaabulo Photos on iPad
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Xogta laga mini iPad ah 2 (isha)
Sida loo hagaagsan Photos in iPad
Sida loo soo celiya iPad Mini ka kaabta iPad / iPhone / Lugood
Sida loo Delete Movies ama Videos ka mini iPad / iPad
Si fudud Bedelka Photos ka iPad in Computer
Sida loo Beddelaan FLV in iPad The New (iPad 3)
Sida loo Download iyo Play YouTube Videos on mini iPad